ကိုပီတာရဲ့အတွေးပုံရိပ်များ: January 2009
နှစ်ပေါင်း ၁၂ တိုင်အောင်ရယ်နေရရှာသူလေး ၊Girl laughs non-stop for 12 years
Girl laugh non-stop for 12 years
Laugh ....bizzare fever left girl with giggles
အသက် ၁၃ နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ. Xu Pinghui ဟာအသက်ရှစ်လသမီးအရွယ်ကတည်းကပင်အဖျား
ပါလို.ဆိုပါတယ်။သူမရဲ.ဖခင် Xu Weiming ကလည်း " ကျွန်တော်တို.မှာစိတ်ကိုမချမ်းသာနိုင်
ယခုအခါသူတို.ကသူမကိုအထူးဓါတ်မှန် ( CT scan ) ရိုက်ပြီးစစ်ဆေးဖို.စီစဉ်နေကြပါတယ်။အဲ
The Chinese teenager cannot even talk – but has to communicate with different types of GIGGLE.
Mum Yang Longying said: “Ever since then she has been laughing uncontrollably.
Her dad Xu Weiming added: “There is no happiness for us. Seeing her laughing we feel even sadder than if she were crying.”
Posted by Unknown | at 12:40 PM |0comments
အနှစ်ခြောက်ဆယ်တိုင်အောင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခဲ.သူPregnant for 60 years since 1948
အသက် ၉၂ နှစ်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ.တရုတ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်း Huangjiaotan ဒေသကအဖွားအိုကို ၁၉၄၈
ဆရာဝန်တွေကထိုသန္ဓေသားအသေလေးကိုဖယ်ထုတ်ပေးဖို.ပေါင်စတာလင်ငွေ ၁၀၀ (ဒေါ်လာ
၂၀၀ ) တောင်းခဲ.လို.မပေးနိုင်ပဲပြန်လာခဲ.ပါတယ်။
သူမက " ဒီလောက်ငွေပမာဏဟာအဲဒီတုံးကတော်တော်များတာပေါ.။မိသားစုတစ်စုလုံးနှစ်နှင်.ချီ
မယုံနိုင်အောင်ဖြစ်ခဲ.ရတယ်လို. Qingshen ဆေးရုံကဒေါက်တာ Liu Anbin ကပြောပါတယ်။
ဆေးရုံမှမီးယပ်နှင်.သားဖွားဌာနညွန်ကြားရေးမှူးအတိုင်ပင်ခံသမားတော်ကြီး Xu Xianming က
She said: "It wasahuge sum at the time - more than the whole family earned in several years so I did nothing and ignored it.”
Dr Liu Anbin at Qingshen hospital said: "I couldn’t believe my eyes when I discovered she hadababy in her belly.
“I’ve beenadoctor for more than 40 years and it’s the first time I have seen something like this."
Consultant Xu Xianming, director of the Obstetrics and Gynecology department at the hospital, said: "Normallyadead foetus would decay. It’s very rare that Huang can be so healthy."
Posted by Unknown | at 10:36 AM |0comments
ဆိတ်ကိုဓါးပြမှုနှင်.ဖမ်းဆီး ၊Goat Arrested for Robbery !
ထားခဲ.သည်။မာဇဒါ ၃၂၃ (ကျွန်တော်တို.ဆီတွင်မဆလခေတ်က၀န်ကြီးများအိမ်သုံးရန်အစိုးရ
အခုလိုဆိတ်အဖြစ်အသွင်ပြောင်းသွားတာဖြစ်တယ်လို. Kwara ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ.ပြောရေးဆိုခွင်.
ရှိသူ Tunde Mohammed က ရိုက်တာသတင်းဌာနကိုတယ်လီဖုန်းဖြင်.ဆက်သွယ်ပြောကြားခဲ.
- Police in Nigeria are holdingagoat on suspicion of attempted armed robbery. Vigilantes took the black and white beast to the police saying it was an armed robber who had used black magic to transform himself intoagoat to escape arrest after trying to stealaMazda 323. "The group of vigilante men came to report that while they were on patrol they saw some hoodlums attempting to robacar. They pursued them. However one of them escaped while the other turned intoagoat," Kwara state police spokesman Tunde Mohammed told Reuters by telephone. "We cannot confirm the story, but the goat is in our custody. We cannot base our information on something mystical. It is something that has to be proved scientifically, thatahuman being turned intoagoat," he said. Belief in witchcraft is widespread in parts of Nigeria, Africa's most populous nation. Residents came to the police station to see the goat, photographed in one national newspaper on its knees next toapile of straw.
Posted by Unknown | at 1:05 PM |2comments
Dumping That Old PC? Take the Hammer to it First
မိတ်ဆွေ... သင်.ရဲ.ကွန်ပြူတာအဟောင်းကိုစွန်.ပစ်တော.မှာလား ? တူနဲ.သာအရင်ထုချေလိုက်ပါ။
စွန်.ပစ်ဖို.စီစဉ်နေပြီဆိုယင်တော.ပထမဦးဆုံး hard disk ကိုအယင်ဖယ်ထုတ်လိုက်ပြီးတူနဲ.သာထုချေ
လက်တွေစွန်.ပစ်ကွန်ပြူတာအဟောင်းတွေဆီကနေမရောက်စေဖို.ကတော.hard drive ကိုလုံးဝ
ဖျက်ဆီးပစ်လိုက်ခြင်းကသာအသေချာဆုံးပါတဲ.။ဖိုင်တွေကို delete လုပ်ယုံ၊ drive တစ်ခုလုံးကို
ထိုမဂ္ဂဇင်း(အဖွဲ.)ကသူတို.ဟာအွန်လိုင်း e-bay ဆိုဒ်ကနေတစ်ပတ်ရစ်ကွန်ပြူတာdriveရှစ်လုံးဝယ်
ခဲ.ရာမျာဖိုင်ပေါင်း ၂၂၀၀၀ ကျော်ကိုပြန်လည်ရှာတွေ.ခဲ.ရတယ်။အဲဒီအထဲကတစ်ချိူ.ဟာတစ်ခြား
ရာဇ၀တ်မှုကျူးလွန်သူတွေဟာ e-bay ကဲ.သို.စွန်.ပစ်တစ်ပတ်ရစ်ကွန်ပြူတာပစ္စည်းရောင်း
Computing Editor ဖြစ်သူ Sarah Kidner ကဆိုပါတယ်။
သင်.ရဲ.ကွန်ပြူတာကဖိုင်တွေကို delete လုပ်လိုက်ပေမယ်.အဲ.ဒီကိုယ်ရေးကုိုယ်တာအချက်အလက်
ရာခိုင်နှုံးကြိမ်းသေချင်ယင်တော.သင်.ကွန်ပြူတာရဲ.hard drive ကိုတစ်စစီဖြစ်အောင်သာထုချေ
If you’re planning on get ting rid of an old computer, make sure you remove the hard drive first and smash it up withahammer,aBritish consumer group advised on Thursday.
Whichfi Computing magazine said the only way to make sure fraudsters could not steal personal details from an old computer’s hard drive was to utterly destroy it, as simply deleting files or wiping the drive was not suficient.
Whichfi said it had bought eight second-hand drives from Internet auction site eBay and recovered 22,000 “deleted” files, including some information that could be confidential.
Criminals, who it said trawled coun cil waste sites and Internet sites like eBay, would be able use specialist software to retrieve the information which could then be used to commit identity theft.
“PCs contain more valuable personal information than ever as people increasingly shop online, use social networking sites and take digital photos,” said Sarah Kidner, Editor of Whichfi Computing.
“Even if you delete your files, you’d be surprised how easy it is to recover your personal data. It sounds extreme, but the only way to be 100 per cent safe is to smash your hard drive into smithereens.”.
Posted by Unknown | at 11:03 AM |0comments
ကားမောင်းပြီးကျောင်းသွားသည်. ၆ နှစ်သားကလေး
ယောက်သည်ကျောင်းသွားရန်သူ.အိမ်မှကားကိုတစ်ယောက်တည်း ၁၀ မိုင်ခန်.အထိမောင်းနှင်
ဖခင်ဖြစ်သူသည်နံနက် ၆ နာရီခွဲတွင်အလုပ်ခွင်သို.ထွက်သွားခဲ.ရာထိုကလေးနှင်.လေးနှင်.အရွယ်
Posted by Unknown | at 8:13 AM |0comments
A parrot that learned to mimic his owner's voice is using the skill to issue orders to her other pets.
ဘားနေးလို.အမည်ရတဲ.အာဖရိကကြက်တူရွေးတစ်ကောင်ဟာသူ.သခင်မ Margaret Sullivan ရဲ.ခွေး
သုံးကောင်ဖြစ်တဲ. Harry, Tilly and Bluey တို.ကိုနာမည်နဲ.ကိုခေါ်နိုင်ပါသတဲ.။
အသက် ၁၀ နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ.ငှက်ဟာ” ဒီကိုလာခဲ.ဦး ” အစရှိသဖြင်.အမိန်.ပေးတတ်ပြီးသူ.အကြိုက်ဆုံး
Gloucestershire နယ် Tredworth ဒေသ မှာနေတဲ. Ken Kersey ဆိုတဲ.သူ.ခင်ပွန်းအဘိုးကြီးနဲ.
အတူနေထိုင်တဲ.အသက် ၆၅ နှစ်ရှိ Mrs Sullivan ကသူမရဲ.ကြက်တူရွေးဘားနေးဟာသူ.ကိုယ်
ထိုအဖိုးကြီးနှင်.အဖွားကြီးမှာ ၁၂ နှစ်အရွယ်ရှိအယ်ဇေးရှင်းမျိူးစပ် Harry ၊ ၃ နှစ်အရွယ်ရှိတယ်ရီယာ
မျိူး Tilly နှင်.သား ၈ လအရွယ်ရှိ Bluey ဆိုပြီးခွေးသုံးကောင်ရှိပါတယ်။
မြေး ၇ ယောက်တို.ရဲ.ဘွားဘွားဖြစ်တဲ. Mrs Sullivan ဟာ ဘားနေးကိုငယ်ရွယ်စဉ် ၁၉၉၈ ခုနှစ်မှာ
သူသဘောအကျဆုံးအလုပ်ကတော. shadow ဆိုတဲ.ကြောင်ကိုအမည်တပ်ခေါ်လေ.ရှိပြီးအဲဒီကြောင်
Mr Sullivan ကပြောရာမှာဒီကောင်ကအမြဲတန်းပဲ ” ဒီကိုလာဦး၊ကဲပါကွာ၊သိပ်တော်တဲ.ခွေးပဲ ” စသည်
Barney, an African Grey Parrot, calls Margaret Sullivan's three dogs – Harry, Tilly and Bluey – by name.
The bird, 10, squawks out orders like "come here" and even offers praise to his favourites such as "good dog".
Mrs Sullivan, 65, who lives in Tredworth, Gloucestershire, with partner Ken Kersey, 62, admitted that Barney hasa"very high opinion of himself".
She said: "Barney'sareally bossy parrot. He even chats back at me and swears when I'm talking sometimes – he's so cheeky.
"He's always tried to learn how to speak in my voice but he has got better and better at it ever since I bought him.
"Barney's gotareally high opinion of himself and he certainly likes to think he's my favourite out of the pets. He's not – but I would never tell him that."
Mr and Mrs Sullivan own three dogs, Alsatian-Collie cross Harry, 12, Cairn terrier Tilly, three, and her son Bluey, eight-months.
Mrs Sullivan,agrandmother-of-seven, bought Barney asayoung parrot in 1998 and he has been perfecting her voice and accent ever since.
His favourite games is calling out toacat named Shadow. He then praises him when he does as he is told and sits on top of Barney's cage.
Mr Sullivan said: "He always says 'come here', 'come on' and 'good dog' to the pets and gives out orders to all the animals in Margaret's voice.
"It's uncanny. He mimics her perfectly and when the dogs come over to the cage as if they are following his orders.
Posted by Unknown | at 11:52 AM |2comments
ဖွားဖွားကြောက်ကြောက် ၊Woman calls police after hubby, 82, takes Viagra
အီတလီနိုင်ငံ ပယ်လာမိုမြို.ရှိအသက် ၆၉ နှစ်အရွယ်ရှိအဖွားအိုတစ်ဦးဟာအသက် ၈၂ ရှိနေပြီဖြစ်
တဲ.သူမရဲ.ခင်ပွန်း Giovanni di Stefano အမည်ရှိအဖိုးအိုဟာအမျိူးသားကာမအားတိုးဆေး Viagra ကိုသောက်သုံးပြီးစိတ်ဓါတ်တွေသိပ်ကြွနေလို.ရဲတပ်ဖွဲ.ကိုဖုံးဆက်ပြီးခေါ်ခဲ.ရတဲ.အဖြစ်တစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ.
စိုးရိမ်ကြောက်ရွံ.နေတဲ.ဇနီးသည်အဖွားအိုကတော." သူကအသက် ၈၂ နှစ်တောင်ရှိနေပြီလေ၊ဒါ
ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို.အဖွားကတွေးပြီးစိတ်ပူမိတာပါ " လို.ဆိုခဲ.ပါတယ်။
အဲဒါပါပဲ အကြီးအကဲဆိုတာ ကြီးလေကဲလေလို.အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။
စသည်ဖြင်.မိန်းမတို.သဘာဝအတင်းတုတ်ပါတော.သည်။ ( အင်းယောင်္ကျားများလည်း
ကားချလိုက်လေသည်။မိမိဘ၀နှင်.ရင်း၍သာသနာပြုမည်ဟုအားခဲထားသူ မမ မှာတော.နှလုံး
ကိုယ်.ဆရာတို. .... အမျိူးပျောက်မှာတော.စိုးကြောက်လှပါသည်။
Posted by Unknown | at 4:53 AM | 1 comments
New presidential limo is unveiled - and it can withstand rocket and chemical attacks
သမ္မတရဲ.မော်တော်ယာဉ်ရဲ.တရားဝင်အခေါ်အဝေါ်ကတော. Cadillac One ပါတဲ.၊ ဒါပေမယ်.
Bob Dylan နဲ. Stevie Wonder တို.ရဲ.သီချင်းတွေအပါအ၀င်သမ္မတကြီးကြိုက်နှစ်သက်တဲ.တေး
Posted by Unknown | at 10:38 AM |0comments
ကာကာသို.မဟုတ်ဘုရားသခင်ရဲ.တမန်တော် Kaka is saviour to millions
JUST LIKE A PRAYER ... Kaka looks to the heavens after winning
Champion League with Milan
ရွေ.ဖို.ကြောက်ခမန်းလိလိနှုန်းထားဖြစ်တဲ.ပေါင် ၂၄၃ သန်း ( ဒေါ်လာ သန်း ၄၀၀ ကျော် )နဲ.
သူက " သူ.ဘ၀ရဲ.အောင်မြင်မှုတွေစွမ်းဆောင်နိုင်မှုတွေဟာထာဝရဘုရားသခင်ရဲ.ကျွန်တော်.အတွက်
ရည်မှန်းချက်နဲ.ရည်ရွယ်ချက်တွေကြောင်.ပဲဖြစ်တယ်။ " "သမ္မာကျမ်းစာမှာဆိုထားတာကဘုရားသခင်
တော်.ဘ၀မှာဒါဟာတစ်ကယ်ဖြစ်နေခဲ.တာပါဗျာ" " ထာဝရဘုရားသခင်သာကျွန်တော်.ဘ၀မှာမရှိ
ခဲ.ယင် ( မယုံကြည်ခဲ.ယင် ) ကျွန်တော်ဟာအခုလက်ရှိအခြေအနေကိုရောက်နေမှာမဟုတ်ပါဘူး "
လုံးတစ်ဖက်အသင်းဂိုးထဲ.၀င်သွားခဲ.ချိန်မှာ ကျွန်တော်.ကိုထာဝရဘုရားခင်ပိုင်တော်မူသည် လို.စာ
အသက် ၂၆ နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ.ကာကာဟာကမ္ဘာ.ဖလားနှင်.ချန်ပီယံလိဂ်ဖလားတွေကိုအောင်မြင်ရရှိခဲ.
ပြီးကမ္ဘာ.ဘောလုံးအဖွဲ.ချူပ်ကချီးမြှင်.တဲ.ကမ္ဘာ.အကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားဆုကိုလည်းရရှိခဲ.
အရာနှင်.မှာနှိုင်းယှဉ်လို.မရပါဘူးလို. ၁၀ သန်းမျှသောဘရာဇီးနိုင်ငံသားတီဗီကြည်.ပရိတ်တွေကို
သူဟာဘာသာတရားရဲ.အဆုံးအမကိုယုံကြည်လေးစားလွန်လို.သူ.ရည်းစာ ကယ်ရိုလင်း နဲ.
သူက " ဒါဟာတစ်ကယ်.စံပြအပြုအမူပါပဲ။ လူတော်တော်များများဟာလက်ထပ်ပြီးတာနဲ.သူတို.ဇနီး၊
ကျူးလွန်ခဲ.ကြလို.အခုတော.ဆန္ဒမရှိကြတော.ဘူးလေ " လို.ဆိုပါတယ်။
ကြည်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကဧ၀ံဂလိအသင်းဝင်( ခရစ်ယာန်ဂိုဏ်းတစ်ခု ) လေ။ဒီလိုလူ.ကျင်.၀တ်
ကျွန်တော်ကတော.လူတွေဟာလက်မထပ်ခင်အတူနေ( လွန်ကျူးခြင်း ) တာကိုရှောင်ဖို.လိုတယ်လို.
ဘရာဇီးနိုင်ငံသားကာကာရဲ.ဘုရားသခင်ကိုသက်ဝင်ယုံကြည်မှုဟာ ၂၀၀၀ ခုနှစ်မှာရေကူးကန်ထဲ
တစ်ဦးအဖြစ်ပုံသွင်းပေးလိုက်တာပါ " ပဲလို.ဆိုခဲ.ပါတယ်။
အဲဒိအချိန်တုံးကကျွန်တော်ဟာဘရာဇီးနိုင်ငံ Caldas Novas မှာရှိတဲ.အဖိုးအဖွားတွေဆီကိုသွားလည်
လက်ရှိချယ်ဆီးဘောလုံးအသင်းနည်းပြ ( ယခင်ဘရာဇီးနိုင်ငံဘောလုံးနည်းပြဟောင်း ) စကိုလာရီ
သူက ကျွန်တော်အသက် ၂၀ မှာပဲသူ ( စကိုလာရီ ) ဟာကျွန်တော်.ကို ၂၀၀၂ ကမ္ဘာ.ဖလားပြိုင်ပွဲ
သူက " ဘာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်.အတွက်စီမံပေးတာပါ။ဘုရားသခင်ဟာကျွန်
အဲဒီကို ( မန်စီးတီးကလပ် ) သွားဖို.အလိုတော်ရှိယင်ကျွန်တော်အဲဒီကိုရောက်နေမှာပါ " လို.ဆို
Hardened criminals turned to Christianity in their thousands.
Posted by Unknown | at 12:03 AM |0comments
Bush, Obama Join Ex-presidents for Historic Meeting
၎င်းနောက် အမေရိကန်နိုင်ငံသမိုင်းမှာ ၂၇ နှစ်အတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်လက်ရှိသမ္မတ၊ရွေး
ပါတီကသမ္မတဟောင်းများဖြစ်ကြတဲ.ဂျင်မီကာတာနဲ.ကလင်တန်တို.ဟာသမ္မတရဲ. Oval office ကို တက်ရောက်ခဲကြပါတယ်။
မယ်.လာမယ်.ဇန်န၀ါရီလ ၂၀ ရက်နေ.မှာပြုလုပ်မယ်.အာဏာလွဲပြောင်းရေးအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်
Oval Office မှာပြုလုပ်တဲ.ဆွေးနွေးပွဲအပြီးမှာတော.သူတို.ငါးဦးဟာမီးဆိုင်းကြီးတွေနဲ.တန်ဆာဆင်
အိုဘားမားရဲ.ပြောရေးဆိုခွင်.ရှိသူ ရောဘတ်ဂစ် ကတော.ရွေးကောက်ခံသမ္မတအနေနဲ.လာမယ်.နှစ်
President George W.Bush and his successor, Barack Obama, joined all the living US presidents on Wednesday forahistoric meeting at the White House two weeks before the country’s next transfer of power.
Then former Presidents Jimmy Carter 84 and Bill Clinton 62, both Democrats, and Republican George H.W.Bush 84, the current president’s father, met
Bush 62 and Obama 47 in the Oval Office foraphoto session with journalists. It was the first such gathering of former US heads of state at the White House in 27 years.
“I want to thank the presidentelect for joining the ex-presidents for lunch,” the younger Bush told Obama, who stood next to him, nodding.
“All of us who have served in this office understand that the office itself transcends the individual and we wish you all the very best, and so does the country,” Bush said to his successor.
“To the extent we can, we look forward to sharing our experiences with you.” Obama called the meeting extraordinary and thanked the current president for hosting it.
“All the gentlemen here understand both the pressures and possibilities of this ofice, and for me to have the opportunity to get advice, good counsel and fellowship with these individuals is extraordinary,” he said.
When asked byareporter what he learned from the other four men’s mistakes, Obama replied: “From their suc cesses!” Despite last year’s presidential campaign when Obama attacked Bush regularly over foreign and domestic policy, the transition process between the Nov.4election and Obama’s January 20 inauguration has proceeded smoothly. Though they have much in common, relations between the presidents have been strained at times.
Carter has criticised Bush’s presidency as “the worst in history” with regard to international relations. Clinton, who hasawarm relationship with the senior Bush, sharply criticized the current president and Obama during his wife Hillary Clinton’s White House bid last year. After their meeting in the Oval Ofice, the five men had lunch inachandeliered private dining room that lasted more than an hour. Aides to Obama and Bush released statements after the meeting, describing the topics discussed at lunch as wide-ranging without getting specific. Obama’s spokesman, Robert Gibbs, said the president-elect was eager to stay in touch with the former presidents in the coming years.
A Buddhist monk has been arrested for allegedly rapingaBritish tourist in Cambodia
ခြင်းကိုခံခဲ.ရတာကိုတိုင်ကြားသတင်းပုို.ဖို.ရစခန်းကိုရောက်လာတဲ. အသက်၃၉ နှစ်ရှိဗြိတိန်လူမျိူး
ပါတယ်။ကိုရင်ကြီး Thorn Sophpan ကလည်းထိုပြစ်မှုကိုဝန်ခံခဲ.ပြီးသူ.ကိုချက်ချင်းဖမ်းပြီးလူဝတ်
ကိုရင်ကြီးဟာထိုအမျိူးသမီးကို Phnom Sam Pov တောင်ထိပ်ပေါ်ရှိသဘာဝလှိုင်ဂူတွေကိုလိုက်လံ
ပြသနေစဉ်မှာအဓမ္မပြုကျင်.ခဲ.တယ်လို.မြို.နယ်ရဲမှူး Mey Chhengly က ဆိုပါတယ်။
၀ပ်ကျောင်းဝန်းထဲမှာအသက် ၈ နှစ်သာရှိသေးတဲ.ပြင်သစ်လူမျိူးကလေးမကလေးကိုမဖွယ်မရာပြု
လုပ်မှုနဲ.အဖမ်းခံခဲရပြန်ပါတယ်။သြဂုတ်လမှာတော.အသက် ၁၀ နှစ်ရှိကလေးမတစ်ဦးကိုအဓမ္မပြု
ကမ္ဗောဒီးယားနိုင်ငံမဟာနိကာယသံဃဂိုဏ်းဥသျှောင် Nun Nget ကပြောဆိုမိန်.ကြားခဲ.ပါတယ်။
အဆိုပါအဓမ္မပြုကျင်.တဲ.ကိုရင်ကြီး Thorn Spphoan ဟာသာသနာ.ဘောင်ကိုဝင်ရောက်တာရက်
Posted by Unknown | at 12:59 PM | 1 comments
Man found wife in bed with priest
စိတ်ဆိုးဒေါသထွက်နေသာထိုယောင်္ကျားသည်ဗင်းနစ်မြို.အနီးရှိ Chioggia ရှိသင်းအုပ်ဆရာတော်ရုံးခန်း
သို.ပို.လိုက်ကြောင်းမြိူ.နယ်သင်းအုပ်ဘုန်းတော်ကြီး Angelo Daniel ကပြောကြားလိုက်ပါသည်။
အသက် ၅၃ နှစ်ရှိကြာခိုသူဘုန်းတော်ကြီးမှာခရစ်ယာန်သမ္မာကျမ်းကိုအထူးကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ပြီး( အဲ
လင်ယောင်္ကျားမှာအသက် ၃၉ နှစ်ဖြစ်ပြီးမိန်းမမှာ ၃၇ နှစ်ဖြစ်ကာသားသမီးနှစ်ဦးထွန်းကားခဲ.သည်။
ဘုန်းတော်ကြီး Daniel ကတော. ၎င်းအနေနှင်.အဆိုပါဘုန်းကြီးကိုအစဉ်အမြဲလေးစားခဲ.ကြောင်း၊
ပါသည်။(သူလည်းအတူ တူပဲနေမှာပေါ.နော် .. ဗျာ။ )
An Italian man returned home from work early - to find his wife in bed with their local priest.
The angry husband stormed into the local bishop's office in Chioggia, near Venice, and demanded an explanation.
Later police had to be called to calm him down, reports the Daily Telegraph.
The local bishop Angelo Daniel has now confirmed that the adulterous priest has been sent to another parish for "reeducation".
Posted by Unknown | at 11:30 AM |0comments
Wife broke into prison
A woman was reportedly caught after breaking intoajail to have sex with her husband.
ထိုဇနီးသည်အမျိူးသမီးသည် Sheppey ကျွန်းငယ်ရှိ Standford Hill အကျဉ်းထောင်သို.မည်သူမျှမသိ
အောင်တနင်္ဂနွေနေ.နံနက်စောစောပိုင်းကခိုးဝင်ခဲ.ကြောင်း The Sun သတင်းစာကဆိုပါသည်။
အပြင်ပြန်ထွက်ဖို.အလုပ်မှာတွေ.မြင်အဖမ်းခံရတာပါလို. The Sun သတင်းစာကဆိုပါတယ်။
Posted by Unknown | at 11:06 AM |0comments
Apple launch $1.5m diamond-encrusted iPhone
ကမ္ဘာ.ဈေးအကြီးဆုံး iPhone
ကမ္ဘာ.စီးပွားရေးပျက်ကပ်က ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေဆဲမှာပဲလက်ဝတ်ရတနာကုမ္မဏီ
အသစ်ထုတ်လုပ်မယ်. ပန်းသီး iPhone ရဲ. 3G King Button ကို ၁၈ ကာရက်ရွှေအစစ်၊ရွှေဖြူတို.ဖြင်.
Austrian လက်ဝတ်ရတနာဒီဇိုင်းထုတ်လုပ်သူ Peter Aloisson ပုံဖော်ထုတ်လုပ်တဲ.အဆိုပါ iPhone ဟာ
သတ်လိုင်းတွေမှာအကောင်းဆုံးအရည်အသွေးဖြတ်ထားတဲ.စိန်အလုံးကလေးပေါင်း ၁၃၈ လုံးထည်.
ပိုင်းကတော.ရှားပါးလှတဲ. ၆.၆ ကာရက်စိန်နဲ.ပြုလုပ်ထားတဲ. home button ခလုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ.
ကဲ ဘဘ ကြီးတွေရဲ.ဇယားလေးတွေဝယ်ပေးဖို.ပူဆာနိုင်ပါပြီ။
Posted by Unknown | at 4:24 AM |0comments
မှားတဲ.အခါလည်းမှားတာပေါ. Bankrobber was cardboard cutout
Bankrobber was cardboard cutout
နယူးဂျာဆီပြည်နယ်၊မောင်ဂိုမာရီမြိူ.က PNC ဘဏ်ခွဲတစ်ခုရဲ.အန္တရယ်သတိပေးစနစ်အသံကြားလို.
ပေါက်နေရောင်ကာတွေရဲ.နောက်မှာရှိနေတယ်လို. Star-Ledger သတင်းစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။
A SWAT team stormedaUS bank to enda90-minute stand-off - only to find their suspect wasacardboard cutout.
Police had responded to an alarm going off atabranch of the PNC bank in Montgomery Township, New Jersey, and spottedamenacing-looking figure inside.
The shadowy image was behind the closed blinds of the bank, which was closed for Thanksgiving, reports the Star-Ledger.
Police sealed off the area to traffic and evacuated three nearby apartment buildings, while trying to make contact with their suspect by megaphone and telephone.
A SWAT team finally decided to end the impasse by storming the bank but found no one inside except the life-sized cutout.
Labels: source : internet
မာတင်္ဂထုံးနှလုံးမူတဲ.သူ ၊Man holds vigil to win back nun
အသဲကွဲခဲ.ရတဲ.အသက် ၂၁ နှစ်ရှိ ဒယ်နီရယ်ဘရီယာတိုရီ ဆိုတဲ.လူငယ်ကသီလရှင်ဝတ်သွားတဲ.
သူနဲ.အသက်တူချစ်သူမိန်းကလေး ပက်ထရီဇီယာ သူ.နောက်ပြန်လိုက်မလာမချင်းအဲဒီသီလရှင်
သူဟာ Alassio ဆိုတဲ.အီတလီမြစ်ကမ်းနဘေးမြို.ကလေးကနေမိုင်ပေါင်း ၃၀၀ ကျော်ဝေးတဲ.
ရောမမြို.တောင်ပိုင်း( ဒဂုံတောင်မဟုတ်ပါ။) က Montecassino Abbey ဆိုတဲ.ကောင်မလေးရှိ
သူ.ချစ်သူ ပက်ထရီဇီယာကသူ.နဲ.တွေ.ဆုံဖို.ငြင်းဆန်တော. သူက " ကိုယ်မင်းကိုပြန်မခေါ်သွား
ချင်ပါဘူး။မင်းကိုချစ်လို.၊မင်းနဲ.စကားပြောချင်တာပါ " လို.စာတန်းလေးရေးပြီးကျောင်းနံရံမှာကပ်
ထားခဲ.ပါတယ်။( ဒီလိုလေးလဲဖိန်.ရတာပေါ.လေ )
Netlog လို.ခေါ်တဲ.အွန်လိုင်ဆိုက်ဒ်တစ်ခုကအဖွဲ.၀င်ဖြစ်တဲ.ဒယ်နီရယ်ကတော.သူ.ကိုယ်သူ Brave-
heart 86 လို. nick name ပေးထားပြီးဘောလုံးဝါသနာပါသူအမျိူးသားတစ်ယောက်လို.ဖော်ပြထား
An Italian man whose girlfriend left him to becomeanun is holdingavigil outside her convent.
Heartbroken Daniel Briatore, 21, has vowed to remain camped outside the convent inabid to win back Patrizia Masoero, also 21, reports the Daily Telegraph.
He travelled 300 miles from their hometown of Alassio on the Italian Riviera to the Franciscan convent at Montecassino Abbey, south of Rome.
When Patrizia refused to see him he put upabanner on the convent walls reading:"I didn't want to take you away, just talk to you, because I love you."
The nuns immediately took the banner down but Daniel has said he will do "whatever it takes" to get her back, boosted by local villagers who are all said to be backing him.
A nun who answered the telephone at the convent said:"Our sister has chosen the path she wants, there is no point in him staying here.
"At the moment she isn't even here, she is in Rome onapilgrimage with her fellow sisters and is due back here at the convent this weekend - we just want all this attention to go away.
"We took the banner down but now the whole place is swarming with TV crews and photographers when I tried to leave the convent it was impossible because i had microphones and cameras pushed into me."
In his entry on Italian social network site Netlog, Daniel calls himself Braveheart 86 and describes himself asa"heterosexual lifeguard who enjoys football".
မနှစ်ကတင်ထားခဲ့ တဲ. အစ္စလာမ်ဥပုတ်လ ( ရာမာဒန် လ ) ဆောင်းပါလေးဖုန်သုတ်ပြီးပြန်တင်
အခုမကြာခင်ကျရောက်တော.မယ်. Ramadan သို.မဟုတ်အစ္စလာမ်ဥပုတ်လနီးလာတော.
မူဆလင်မိသားစုတွေဟာအာရုဏ်မတက်မှီ suhoor လို.ခေါ်တဲ.မနက်စောစောစာ
အဲဒီလရဲ. ၂၆ ရက်မြောက်နေ.မှာတစ်နေ.လုံးဘုရားရှိခိုးယင်ဘုရားသ္ခင်နဲ.တွေ.နိုင်ပြီး
အသက်နှစ်ပေါင်း ၆၀ ပိုနေရတယ်လို.ယုံကြည်ပြီးအဲဒီနေ.မှာတစ်နေ.လုံးတစ်ညလုံးဗလီမှာဘုရား
တော. Eid-al-Fitr လို.ခေါ်တဲ.ဥပုတ်ထွက်စားသောက်ပွဲကိုအကြီးအကျယ်လုပ်ကြပါတယ်။အဲဒီနေ.
အရက်ကိုလည်းမူဆလင်ဘာသာဝင်မဟုတ်သူတွေကိုည ၇ နာရီကစပြီးမနက် ၂ နာရီအထိ
Posted by Unknown | at 3:07 AM |2comments
Man granted divorce for mother-in-law's nagging
အသက် ၃၆ နှစ်ရှိဆိုင်ပိုင်ရှင် လူကာရော.စီ က ဆယ်လာနိုမြိူ.ကတရားရုံးတော်မှာလျှောက်လဲခဲ.ရာ
မှာသူတို.အိမ်ထောင်သက်တမ်း ၄ လအတွင်းမှာသူ.ယောက္ခမဟာသူ.ကိုတစ်ရက်မှနားချမ်းသာရ
ကဲ ... မိတ်ဆွေ .. သင်ကရော.. အဆိုပါထီမျိူးပေါက်ချင်ပါသလား?
A hen-pecked husband has been grantedadivorce in Italy because his mother-in-law keeps nagging him.
"Next time I'm hoping to findagirl who's an orphan," he added.
Posted by Unknown | at 11:59 AM |0comments
နေရစ်ခဲ.တော. ၂၀၀၈ နှင်.အာရပ်ဒေသတစ်ပိုင်းတစ်စ
ခရစ်သက္ကရာဇ် ၂၀၀၈ ကတော.ကုန်ဆုံးခဲ.ပြီ။အတိတ်ကိုအတိတ်မှာမထားပဲဆက်လက်
သယ်ဆောင်ချီတက်ကြရဦးမယ်.လူသားတွေအတွက်ကတော. ၂၀၀၈ ဟာသတိတရများစွာအထိအ
တနဲ.၀န်ကြီးချူပ်ရာထူးတွေလဲရထားတဲ.ရှိတ်မိုဟာမက်ကဒူဘိုင်းမှာ ၃၁ ရက်နေ.ညမှာပြုလုပ်မယ်.
ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်ညမှာတော.ကမ္ဘာကျော်ဒူဘိုင်းကဟိုတယ်တွေကတော. outdoor အခန်း
အနား ( ပြင်ပမှာလုပ်တဲ.နှစ်ကူးပွဲ) မလုပ်ရလို.ဟိုတယ်အဆောက်အဦးထဲကစားသောက်ဆိုင်နဲ.အရက်
ကျွန်တော်တို.နေထိုင်တဲ.ဒူဘိုင်းရဲ.မြိူ.စွန်ရပ်ကွက်မှာတော.ည ၁၁ နာရီ ၄၅ မိနစ်လောက်
မယ်.ကမ္ဘာနဲ.အ၀ှမ်းတွင်ကြယ်စွာသုံးစွဲနေတဲ.ခရစ်သက္ကရာဇ်ရဲ.နှစ်သစ်ကူးကတော.ကမ္ဘာပေါ်မှာလူဦး
ရေအများဆုံးကျင်းပတဲ.နှစ်သစ်ကူးပွဲဆိုတာ Globalization ရဲ.သဘောကိုသက်သေပြနေတော.တာပါပဲ။
Posted by Unknown | at 5:00 AM | 1 comments
နှစ်ပေါင်း ၁၂ တိုင်အောင်ရယ်နေရရှာသူလေး ၊Girl laugh...
ဆိတ်ကိုဓါးပြမှုနှင်.ဖမ်းဆီး ၊Goat Arrested for Rob...
Parrot mimics owner's voice to boss around her oth...
ဖွားဖွားကြောက်ကြောက် ၊Woman calls police after hub...
ကာကာသို.မဟုတ်ဘုရားသခင်ရဲ.တမန်တော် Kaka is saviour ...
မှားတဲ.အခါလည်းမှားတာပေါ. Bankrobber was cardboard ...
မာတင်္ဂထုံးနှလုံးမူတဲ.သူ ၊Man holds vigil to win bac...